စီးပွား/ကူးသန်းထုတ် စာစောင်များ	မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်များ (၁) မြန်မာ - အိန္ဒိယ ( ၂၁- ၁- ၁၉၉၄ )
(၂) မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ( ၁၈- ၅- ၁၉၉၄ )
(၃) မြန်မာ - တရုတ် ( ၁၃- ၈- ၁၉၉၄ )
(၄) မြန်မာ - ထိုင်း ( ၁၇- ၃- ၁၉၉၆ )
(၅) မြန်မာ - လာအို ( ၆- ၁၂- ၂၀၀၀ )
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ နှစ်အလိုက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ မြန်မာ - တရုတ် နယ်စပ်စခန်းများ
(၁) မူဆယ်(၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန် ( ၁၂- ၁- ၁၉၉၈ )
(၂) လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၂၃- ၈- ၁၉၉၈ )
(၃) ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၁၉- ၁၀- ၂၀၀၃)
(၄) ကန်ပိုက်တီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၁- ၈- ၂၀၀၉ ) မြန်မာ - ထိုင်း နယ်စပ်စခန်းများ
(၁) မြဝတီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၁၆- ၉- ၁၉၉၈ )
(၂) တာချီလိတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၁၆- ၃- ၁၉၉၆ )
(၃) ကော့သောင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၁- ၆- ၁၉၉၆ )
(၄) မြိတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း (FOB) ( ၁- ၇- ၁၉၉၉ )
(၅) နဘုလည်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၂၉- ၃- ၂၀၁၂ )
မြန်မာ - အန္ဒိယနယ်စပ်စခန်းများ (၁) တမူးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၁၂- ၄- ၂၀၀၅ )
(၂) ရိဒ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၁၀- ၁၂- ၂၀၀၃)
မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်စခန်းများ (၁) စစ်တွေနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၁၁- ၁၂- ၁၉၉၈ )
(၂) မောင်တောနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၅- ၉- ၁၉၉၅ ) MINISTRY OF COMMERCEBuilding 3, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar.Tel: 067 - 408002, Fax: 067 - 408004Email: mochmo@moc.gov.mm, mocdhmo@moc.gov.mm@2011 Ministry of Commerce. All rights reserved. Powered by Inforithm-Maze
www.commerce.gov.mm	Visitors 3774053 Since June 2008